Gbasara anyị - Fujian Robust Power Co., Ltd.
Ikanam ụlọ Spec Light
Lightlọ Elu Ihie Obere
Ikanam Cube Light Towers
LEDlọ elu ọkụ na-acha ọkụ
Ndị na-enye ọkụ
Igwe Osisi Polish
Ike siri ike
Otu n'ime ụwa
na-eduga ndị nrụpụta
nke àgwà Ikanam ụlọ elu ọkụ
E guzobere Robust Power® na 2007, yana isi ndebanye aha nde 10 RMB. Ike mmepe, imewe, rụpụta na ire ahịa maka imepụta ụlọ elu ọkụ mkpanaka na akụrụngwa ọkụ. Na ike imewe na mmepe ike nri ehihie si ọhụrụ ngwaahịa, ngwaahịa na e rere na exported na US, Canada, Europe, South America, Southeast Asia, Middle East, Africa, Australia wdg
Nwere ala 5-acre na imepụta ihe nkpuchi 23 puku square mita ma nwee narị ndị ọrụ, ihe karịrị 20% nke ndị ọrụ na-etolite otu ndị na-akwado nkwado na teknụzụ. Anyị abanyela na ụlọ ọrụ a maka ihe karịrị afọ 13, ndị ọrụ ahụmahụ anyị nwere ike ịnye gị ụzọ dị mma esi arụ ọrụ iji mejuo arịrịọ ndị ahịa, yana imewe mgbanwe.
All anyị ngwaahịa ndị mbụ imewe site mmepe otu na 3D imewe software, arụpụtara site mmepụta otu na ọhụrụ teknụzụ dị ka laser ọnwụ, ịgbado ọkụ robot na n'ogige atụrụ ferrous ihe wdg Ha niile ga-belata ike nke nsogbu njehie, na-ekwe nkwa àgwà na batter maka n'ichepụta ngwaahịa.
Robust Power® nwere ihe ikikere 48 mepụtara na asambodo mba ya. Ike mmepe otu ekwe ka na-enye ọtụtụ nke ngwaahịa nke ìhè ụlọ elu na pụrụ iche customization ọrụ maka ọ bụla ulo oru ngwọta, na-arụ ọrụ anya na gị ahịa 'ina.
Ogo bụ ihe mbụ dị mkpa nke Robust Power®, nke na-ewe ihe niile kwesịrị ekwesị iji hụ ma chekwaa ogo ngwaahịa. Usoro niile na mmepụta na-eso usoro njikwa njikwa mba ụwa IOS9001-2015 maka ilekwasị anya nke zuru oke. Asambodo ngwaahịa, nke gụnyere ISO9001: 2015, SGS, SAA, CE, akwụkwọ nyocha ule mgbochi na ihe ndị ọzọ. Robust Power® na-enye ụlọ elu ọkụ igwe eletriki dị elu yana oriọna oriọna nweta ọkwa dị elu na ụlọ ọrụ mba ụwa na teknụzụ mara mma
Onye isi ahia
Ndị mmadụ dabeere, isi ụlọ ọrụ azụmaahịa nke Robust Power®. Anyị ga na-aga n’ihu ịgakwuru ndị ahịa arịrịọ, na-ebili ngwọta. Dị ka a ụlọ ọrụ na ike uche nke ụlọọrụ na-elekọta mmadụ ọrụ, anyị na-elekwasị anya na ọkọnọ n'elu uru, odi mfe, chawapụrụ, na elu arụmọrụ na ngwaahịa.
Banyere Ike Dị Ike
Dị na China, ọ bụrụ na ịzụta n'aka anyị, anyị na-enye ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ dị mfe.
Ihe niile ndị ọzọ na-enweghị ike inye ndị na-eweta ihe ọkụkụ Mobile Lighting ngwa ngwa.
Ekwentị: 0086-0591-83850378, 0086-0591-83850377
Weebụ: Robuster Lighting
Na-atụ aro ngwaahịa